Sool: Shir Lagu Nabadaynayay Laba Beelood oo La Soo Gebagabeeyay | Gabiley News Online
Sool: Shir Lagu Nabadaynayay Laba Beelood oo La Soo Gebagabeeyay
– Maamulka gobolka Sool iyo ka degmadda Laascaanood iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay shir lagu heshiisiinayay laba beelood oo walaalo ah degaanka Adhi-cadeeye ee gobolka Sool.
Waxa kaloo shirkaasi xidhitaankiisa ka qayb galay taliyeyaasha ciidamadda qaranka Somaliland ee aagga Adhi-cadeeye, taliska qaybta booliska ee gobolka Sool, cuqaal, madax dhaqameed iyo marti sharaf kale.
Maayarka Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, oo xidhitaanka shir nabadeedkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in nabad la wada qaato in ay dan u tahay beelaha walaalaha ah ee wada degan degaanka Adhi-cadeeye.
C/raxiin Cali Ismaaciil, ayaa ku booriyay waxgaradka iyo odayaasha beelaha la heshiisiiyay iyo maamulka degmadda Adhi-cadeeye in haddii ay nabadgeliyadda adkeeyaan in ay kala shaqayn doonaan homarumarka.
Sidoo kale,maayar ku-xigeenka Laascaanood Axmed Kawte, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay Nabadaynta Beelaha Adhi-cadeeye.
Wuxuuna la dar-daarmay bulshadda reer Adhi-cadeeye, oo uu ku booriyay in nabadgeliyadda wada ilaaliyaan.
badhasaabka gobolka Sool C/kariin Aadan Xaaji Diiriye, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku amaanay waxgaradka iyo odayaasha beelaha degaanka Adhi-cadeeye in ay nabadgeliyo qaateen.